Ny nolazaina voalohany indrindra aloha dia ny isan’ny mpikambana: 23 teo aloha ary lasa 19 kosa avy eo. Ezaka ho amin’ny fitsitsiana ve sa ireo aloha no tena atokisana hisahana ny andraikitra? Na izany na tsy izany mba manitikitika ny saina ihany ny mahalala hoe oviana moa no maro indrindra ny isan’ny minisitra tamina governemanta fa ny vitsy indrindra kosa ataoko fa tamin’ny andro nitondran’ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa. Mbole mety ho diso aho na dia izany aza.
Faharoa manaraka izany dia ny filaharan’ny arofenitra, tahaka ny misy fiovana mromaro ihany na dia mety ho tsy ho tsikaritry ny maro aza. Misy dikany lehibe amin’ny laharam-pahamehana eo amin’ny mpitondra ihany io filaharan’ny arofenitra io na tsy dia misy miraharaha loatra aza. Tadidintsika tsara fony Atoa Zazah Ramandimbiarison no praiminisitra lefitra misahana ny asa vaventy fa tamin’izany fotoana izany dia izy no faharoa manaraka ny praiminisitra Jacques Sylla. Nisy aza ny fanadroadroana nataon’ny mpanao gazety fa ny resaka sosialy ihany sisa no tena nosahanin’ny praiminisitra. Fantatra ihany taty aoriana fa ny Praiminisitra ihany no ela nitoerana kokoa teo amin’ny andraikitra nosahaniny.
Ny eo amin’ny roa voalohany moa dia tsy nisy fiovany loatra. Sady praiminisitra no minisitry ny atitany ny Jeneraly Charles Rabemananjara. Mety ho mahatadidy isika fa ny Praiminisitra Tantely Andrianarivo tamin’ny fotoanany dia nitana ihany koa ny toeran’ny minisiteran’ny teti-bola (sa ny toe-karena moa? Ity indray no tsy fantatro intsony satria ilay tsy notanan’ny praiminisitra no noraisin’ny praiminisitra lefitra ). Endrika roa samihafa itondrana ny fitantanam-panjakana ireo tsikaritra ireo. Ny Jeneraly moa dia ny fandriampahalemana eto amin’ny firenena no tena imasoana moa ny tamin’ny andron’I Tantely Andrianarivo kosa dia azo heverina fa ny fifehezana na ny fahalalana ny kitapom-bola no tena nobanjinina ka tsy azo lavina fa nisy tokoa ny fandrosoana indrindra teo amin’ny fandraharaharana tamin’ny fotoana nitondran-dRatsiraka farany teo (aleo hajaina amin’ny vitany kosa ny olona nitondra maharitra ny firenena arymanao fijery tsy mitongilana isika. Ny tena tsy zakan’ny olona tamin’izany fotoana izany dia ny fanjakazakan’ny zanany vavy indrindra indrindra fa tsy noho ny tsy fahaizana mitondra velively).
Ny laharana fahatelo dia ny minisiteran’ny raharaham-bahiny, izay tena fantatra fa imasoan’ny fitondrana fatratra indrindra ny hisintonana mpandraharaha vahiny araka izay lazaina. Fa ny fahaefatra kosa dia izay niteraka ny adi-hevitra indrindra satria vehivavy no nampisahanana izany andrikitra izany ankoatra ny mahasivily azy (na dia vadina kolonely aza ramatoa). Ny somary mahatalanjona amin’ity resaka iray ity ankoatra ireo manamboninahitra ambony (atao hoe sasany) dia toa ny vehivavy indray no tena maro manohitra ny fanapahan-kevitryny filoha. Dia toa ny lehilahy indray no miaro ny fanapahan-kevitra noraisin’ny filoha Ravalomanana. Ny hevitra fanoherana moa dia hoe tena manana ny hay politika ve ny nampisahanana izany sy ny hoe nianatra tamin’ny sekolin’ny paikady sy ny sekolin’ny ady ve ny olona nampisahanana io andraikitra goavana io. Ny miaro kosa dia misy raisiko ny kely novakiako tamin’izay nolazain’ny Jeneraly Guy Ratrimoarivony manao hoe efa ela no nitakiako ny hisahanan’ny sivily io minisitera io satria fanapahan-kevitra politika no atao ao (fa tsy fanapahan-kevitra stratejika? Fanontaniana sendra mba lasa fotsiny ny ahy).
Ny mampieritreritra ihany koa dia misaina ihany ny tena hoe sao dia amin’ny mahasamy avy any avaratra ny teo aloha sy ny vaovao ary no nanaovana ny famindrana ny fahefana ho tahaka izao aloha? Marina fa tena goavana ny famindrana ny andraikitra sahala amin’itony ka any amin’ny lafiny hafa tsingolohan’ny sasany no nandraisana fisorohana mialoha. Izay tena sitraky ny mpirahalahy nanapa-kevitra farany tokoa moa ny amin’izy io. Ataoko fa efa hitantsika ihany ny fitakian’ny mpanohitra amin’izao fotoana izao ny hisian’ny “quota” isaky ny fari-piadidiamparitra hoe mitongilana loatra amin’Antananarivo ny andraikitra.
Ny tsikaritra manaraka izany dia any amin’ny laharana faha-10 sy faha-11 vao mipetraka ny minisitera mikasika vola sy toe-karena rehetra rehetra. Mampieritreritra fatratra io zavatra io. Tsy laharam-pahamehana intsony ve ireo zavatra roa ireo? Tany andalam-pandrosoana rahateo isika. Fa ny manampy trotraka ihany koa dia ny fahitana ny minisiteran’ny angovo sy ny harena ankibon’ny tany any amin’ny laharana faha-13 nefa dia vao nosarahina soa aman-tsara ireo sehatra roa ireo tamin’ny fanombohan’ny taona. Mbola maro ny zavatra mety ho azo lazaina tahaka ny hoe ny ao amin’ny fampianarana no andanian’ny fanjakana vola be indrindra amin’izao fotoana izao tsy tahaka ny tamin’ny andron-dRatsiraka izay ny fiarovana kosa no nanana anjara betsaka indrindra. Tena tia fanabeazana ve ny filoha? Fa na izany na tsy izany dia tsara ihany ny mametraka ireo laharan’ny minisitera sy ny mitana nyandraikitra voalohany hanaovantsika rehetra misintona izay any an-tsaintsika any aloha ifanakalozan-kevitra:
1.Praiminisitra, sy atitany: Jly Rabemananjara Charles.
2.Fitsinjaram-pahefana sy fanajariana ny tany: Randriasandratriniony Yvan.
3.Raharaham-bahiny: Jly Ranjeva Razanakombana Marcel.
4.Fiarovam-pirenena: Manorohanta Cécile Marie Ange.
5.Fitsarana : Ramanandraibe Ranaivoharivony Bakolalao.
6.Fambolena, fiompiana, jono : Ratolojanahary Marius.
7.Fanabeazam-pirenena sy fikarohana siantifika: Radavidson Andriamparany Benjamin
8.Asa vaventy sy famatarana ny toetr’andro: Randriamampionona Roland.
9.Fahasalamana sy fandrindrana ny fiainam-pianakaviana: Dr Jean Louis Robinson Richard.
10.Toe-karena, varotra, indostria: Razafimahefa Ivohasina.
11.Vola sy teti-bolam-panjakana: Razafinjatovo Haja Nirina.
12.Tontolo iainana, rano, ala, fizahantany: Randriamanana Harison Edmond.
13.Angovo sy harena ankibon’ny tany: Razaka Elisé.
14.Asa sy lalàna sosialy: Tsiandopy Jacky Mahafaly.
15.Fifandraisana, paositra ary ny serasera: Andriatavison Ramaroson Bruno.
16.Fitaterana : Ravelonarivo Laporte Julien.
17.Spaoro, kolontsaina, fialamboly : Ramiaramanana Patrick Xavier Hugues.
18.Lefitra fahasalamana sy fandrindrana ny fiainam-pianakaviana : Dr Rahantanirina Marie Perline.
19.Sekreteram-panjakana atitany miadidyny filaminam-bahoaka : IGPolice Rasolofomanana Désiré.